Ukuphupha ngeDenmark ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IDenmark imi kumantla eYurophu kwaye lelinye lamazwe aseScandinavia. Intloko yelizwe ngu-Queen Margaret II, kodwa ikakhulu wenza imisebenzi yokumelwa. Nangona kunjalo, umthetho kunye noorhulumente ngokwawo baphantsi kwePalamente yaseDenmark.
Idolophu enkulu yaseDenmark yiCopenhagen. Kubemi beli lizwe abaphantse babe zizigidi ezithandathu, ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi bahlala embindini wesixeko uqobo, esisisihlalo sepalamente kunye nendawo yokuhlala esemthethweni yeKumkanikazi. Umda wesizwe waseDenmark kukuphela kweJamani. Iilwandle zaseMantla kunye neBaltic zodwa zenza imida emininzi yelizwe. Ukusukela ngo-2000, nangona kunjalo, kuye kwakho unxibelelwano olungagungqiyo eSweden kunye ne-Øresund Bridge. IDenmark lilizwe elinendawo ezininzi ezinomdla kunye nendalo eninzi.
Ukuba iDenmark luphawu lwamaphupha kwilizwe lethu lamaphupha, ngamanye amaxesha umyalezo obalulekileyo ovela kwi-subconscious yethu unokufihlwa ngasemva kwawo.
1 Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolikwa ngokubanzi
Umtsalane okhethekileyo eDenmark ngumfanekiso wobhedu we-Little Mermaid, emi phezu kwelitye eliseCopenhagen. Ukuba uphuphe ngaye ngokunxulumene notyelelo eDenmark, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha uyakuqonda njengecebiso, amacala akhe athambileyo obufazi. Ingqwalaselo engakumbi nika. Oku kuyinyani ngokukodwa kubantu abaphuphayo.
Kubantu abadibanayo neDenmark mermaid ephupheni, oku kungazisa uthando olunomdla. Kule nto idibanayo, umtsalane womlingo uya kubonakala, omnxilisa kwaye afuna ukulandela. Nantoni na evakalayo ilungile iyavunyelwa. Nangona kunjalo, kuya kufuneka unethemba lokuba umntu wakho omthandayo angasuka kuye ngokukhawuleza. Kanye njengokuba engakwazi ukuqonda intelekelelo ethe-ethe, uya kuhlala ekrelekrele ngobuhlakani kuye.
IDenmark inenye intsingiselo njengomqondiso wephupha. Ke, ilizwe elikumantla likwabonisa iphupha kwizinto uhlobo y Ukuthanda inkululeko phantsi. Ilizwe elirhangqwe ngokupheleleyo ngamanzi lisibonisa ngokucacileyo inkululeko yethu nobomi bokuzimisela. Indawo esemantla eDenmark ikwaqulathe isidingo sokuphumla, ukuphumla kunye nomgama kubomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolikwa kwengqondo
Rhoqo kunzima ukuba sikhumbule iinkcukacha zemeko yokulala emva kokuvuka. Kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto zizinto ezincinci ezinokuba luncedo ekutolikeni amaphupha. Ke kuyenzeka ukuba umntu aphuphe amanzi, amaphenyane okanye amaxhama ngokunxulumene nomfanekiso wephupha "iDenmark". Ezi iisimboli kufuneka zongezwe kuhlalutyo lwamaphupha kwaye, ewe, kufuneka zisoloko zitolikwa ngokunxulumene neemeko zokuphila zobuqu.
Ilizwe ukuza kuthi ga ngoku emantla ngamanye amaxesha likwabhekisa kulo ngokwembono yengqondo. isengqiqweni wagxininisa kubuntu balowo uphuphayo. Uhlala ugcina intloko epholileyo ebomini, ikunceda ungavumeli iimvakalelo zakho zikukhokele kakhulu xa usenza izigqibo ezibalulekileyo.
Nangona kunjalo, umfanekiso wephupha "iDenmark" unokuba nawo Isiginali Ayisiyiyo kuphela ukuya kwinqanaba lokuqiqa, kodwa ikunika nokufudumala kunye nokuziva indawo elinganayo ebomini bakho.
Uphawu lwephupha «iDenmark» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga, umfanekiso wephupha "iDenmark" uthetha Libertad y ukunyamezela. Ngokubhekisele kufutshane kwisimboli yamaphupha asentla, iDenmark ikwaqulathe unxibelelwano kunye nomhlaba.